Al-Shabaab oo laba ruux ku toogtay gobolka Hiiraan | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Al-Shabaab oo laba ruux ku toogtay gobolka Hiiraan
Al-Shabaab oo laba ruux ku toogtay gobolka Hiiraan
Wararka ka imaanaya deegaanka Buq Aqalba ee Gobolka Hiiraan ayaa toogasho lagu fuliyay labo ruux oo ay kooxda Al-Shabaab ku eedeysay inay yihiin basaasiin.
Maxkamadda ay leedahay kooxdaas ayaa raggan ku xukuntay dil toogasho, kaddib markii ay sheegtay inay qirteen inay u basaasayeen Sirdoonada Soomaaliya iyo AMISOM, inkastoo aanay raggaas helin wax qareen oo difaaca.
Eedaysanaha labaad ee shalay lagu dilay deegaanka Buq Aqable oo lagu magacaabo jiray Cabaas Maxamed Cismaan ayay Shabaab u sheegeen in uu la shaqeyn jiray qeybta sirdoonka ee magaalada Beledweyne, waxaana laga soo qabtay tuulada Booco ee gobolka Hiiraan.
Maleeshiyada Al Shabaab ayaa dilal toogasho ah ku fuliya dad kala duwan oo ay ku eedeeyaan inay xiriir la leeyihiin Maamulada dalka ka jira iyo dowladaha reer Galbeedka.
Maqaal horeHowl-gal ballaaran oo laga sameeyey magaalada Jowhar
Maqaal XigaGalmudug oo soo saartay digniin ku socota shacabka Hobyo